Manakenda Ny Artista Ny Lalàna Ao Japana Mikasika Ny Fahavetavetana · Global Voices teny Malagasy
Manakenda Ny Artista Ny Lalàna Ao Japana Mikasika Ny Fahavetavetana
Voadika ny 19 Febroary 2013 14:58 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, polski, srpski, English
Nosamborina ilay mpaka sary lamaody antsoina hoe Leslie Kee, izay niara-niasa tamin'ny mpihira fanta-daza maneran-tany Beyonce sy Lady Gaga, noho ny famarotana sary mamoafady tamin'ny fampirantiana nataony farany teo tao Roppongi, Tokyo tamin'ny faha 4 Feboary 2013. Araky ny lalàna Japoney, ireo sary rehetra mampiseho taovam-pananahana dia tsy azo avoaka avokoa, izany hoe ny sanganasan'i Kee izay mampiseho fiboridanana dia mazava ho azy fa mandika lalàna.
Sarin'i Michelangelo avy amin'i David ,novain'i Keiko, tao amin'ny wikimedia commons, nampidirin'i Silmaril (CC BY SA 3.0)
Tamin'ny faha 7 Febroary, nadaboka ny fitsarana io raharaha io, satria ny fisamborana azy dia niteraka adihevitra be teo amin'ny fahalalahan'ny artista sy ny fivelaran'ny lalàna Japoney mikasika ny sary mamoafady. Fantatra amin'ny fomba ofisialy amin'ny he Andininy 175 ao amin'ny Fifehezan-dalàna Japoney mikasika ny sazy famaizana, io lalàna io dia mandrara ny fanaparitahana, fivarotana, na ny fanehoana ampahibemaso ny fitaovana rehetra mamoafady.
Kee izay mipetraka ao Tokyo dia fantatra ihany koa amin'ny sanganasany manaitaitra ny filan'ny nofo ho an'ireo ‘homo’. Nanoratra tao amin'ny Twitter [ja] ilay mpanoratra sady mpanao gazety @quitamarco:
<mba hamafiso anie ity azafady indrindra e> Manohitra ny fitazonana an'i Leslie Kee aho. Nitondra ny fahafahan'i LGBT ny fomba fanehoany ny talentany. Ny fanambaniana ny asany amin'ny hiantsoana izany ho “mamoafady” na koa “mahamenatra” ary tsy am-pahamendrehana dia tsy mitombona ka lasa manambany ny lanjan'ny asany.
Nanamafy [ja] ilay mpanjifa iray hafa @WildcatBooko fa tamin'ny fisamborana an'i Leslie dia hita fa manembatsembana ny fahafaha-mitenin'ny tsirairay avy ny mpitandro ny filaminana:
@quitamarco Raha afaka milaza ny fomba fijeriko aho, dia hitako fa sarotsarotra io toe-draharaha io satria i Leslie dia tsy nivarotra io sary “mamoafady ” io teo imasom-bahoaka. Ny volany manokana no nampiasainy hamoahana ny boky misy ny rakitsariny. Trangan-javatra mampivarahontsana io ho ahy ary azo lazaina ho fampiharana lalàna mamepetra ny fahalalahan'ny olona tsirairay haneho hevitra.
Ankoatran'ny sanganasan'i Lee, dia tsy nankatoavina ihany koa ny fampirantiana notarihin'ilay artista Japoney sangany amin'izao fotoana izao antsoina hoe Makoto Aida ao Tokyo. Ny ahalalan'ny olona ny asany dia ilay somary manainga ny filan'ny nofo sy ilay miteraka adihevitra lehibe.
Tamin'ny 25 Janoary 2013, namoaka taratasy fanoherana iray [en] niantefa tany amin'i Mori Art Museum, ilay toerana hanaovana ny fampirantiana, ireo Vahoaka manohitra ny Fahavetavetana sy ny Herisetra Ara-nofo (PAPS) [ja] :
Karazana fahavetavetana atao amin'ny zaza ireo sanganasa ireo. Mitovitovy amin'ny fanararaotana ara-nofo miantefa amin'ny zaza na koa fanararaotana eo amin'ny fanaovana takalo ara-bola ny resaka ara-nofo izany. […]
Ilay andian-tantara nampitondraina ny lohateny hoe ‘Alika’ dia manambany ny vehivavy sy ny tovovavy ho toy ny tsy olona, ary mampitovy azy ireo amin'ny kilalaon'ny filan'ny nofo sy biby fanaovana firaisana ara-nofo.[…] Ohatra iray amin'ny fanavakavahana io fampirantina io ary maniratsira ireo bory ratsam-batana ary ireo olon-kafa manana kilema.[…]
Eo amin'ny toerany amin'ny maha fikambanana manana ny maha izy azy, dia nampita hafatra mafonja ny Mori Art Museum amin'ny alàlan'ny fampiantranoana io fampirantiana amin'izao fotoana io. […] Ny fampiantranoan'ny Mozea ilay fampirantiana dia manisika fatratra ny fihetsika manavakavaka sy ny herisetra ho toy ny zava-mahazatra, ary mandrisika be ny fanararaotana ara-nofo ireo tovovavy, ny herisetra miantefa amin'ny vehivavy, ary fanavakavahana sy faniratsirana ireo olona manana kilema.
Nisy fikambanana mpiasa an-tsitrapo iray antsoina hoe Vondrona miandraikitra ny ara-kolotsaina [ja] izay mandalina ny fahalalaha-mitenin'ny tsirairay ao Japana, nanao fanambarana ofisialy [ja] mikasika ny tsy fitovian-kevitra amin'io resaka fampirantian'i Makoto Aida io:
Miaina ao anaty fiaraha-monina salama isika izay mampanantena ny fisian'ny fahalalaha-miteny ary izay indrindra no ankafizantsika, tsy ny asa maneho talenta fotsiny ihany, fa koa ny fahafahana maneho ny fomba fijerintsika sy ny hevitsika ihany koa. Ny fisian'ny fanakianana ny sanganasan'ilay artista antsoina hoe Makoto Aida dia porofo mivaingana maneho fa ny fiaraha-monintsika ihany no ahitana fahalalaha-miteny ary tokony horaisintsika tsara izany.
Na izany aza, ilay fangatahana ny hanaisotra ny sanganasany, dia manakana ny vintana rehetra hifanakaloan-dresaka sy hisaintsaina amin'ny fijerena ny sanganasany.
Tokony hoarovana feno ny fahafaha-miteny raha tsy hoe mandika ny zo manokana ananan'ny olona iray manokana angaha izany, ary amin'ny fahitàna ilay fomba fiteny, dia tokony hoarovana ny zo hifanakalo hevitra sy hanakiana miaraka amin'ny olona tsirairay misaina amin'ny fomba malalaka.
Amin'ny maha mpamorona sy maha olon-tsotra antsika, dia tsy manaiky ilay fangatahana hanaisotra ny sanganasan'i Makoto Aida ao amin'ny Mori Art Museum isika.
Mahatsapa ny olona sasany fa tsy mikasika fahafaha-miteny fotsiny ihany io. Amin'ny fanondroana ny fanafoanana ny fampirantiana sarin'i Ahn Se-Hong mikasika ireo vehivavy manao atin'akanjo tamin'ny volana May 2012 dia nanambara [ja] ny taranaka Koreana @rinda0818 hoe :
Ireo fitantaràna ny fisian'ny adihevitra mikasika ny fanehoana fitanjahana nataon'i Aida Makoto sy Ahn Se-Hong dia samy latsaka any anatin'ny sokajin'ny fahafaha-miteny avokoa, fa tena izay tokoa ve no tena izy? Ao anatina firenena iray izay tsy voahaja akory ny zon'olombelona [fototra], indraindray mivadika ho herisetra ny fahalalaha-miteny. Ho an'ireo voalohany, ny sanganasa maneho talenta dia herisetra, ary ho an'iretsy farany, ny fanoherana ny fampirantana dia herisetra ihany koa. Tsapako ho misy zavatra tsy mety ao.
Boky mampiseho sary mamoafady somary manjavona eny amin'ny trano fivarotana lehibe ao Japana, nalaina tao amin'i eliazar mpampiasa Flickr . (CC BY 2.0)
Tweet anankiray hafa indray koa avy aminà mpikambana iray @tatangarani [ja] dia mitodika amin'ireo tranga roa mikasika an'i Makoto sy Leslie ireo ary nilaza izy fa diso làlana ny lalàna ao Japana :
Raha toa ka lazaina fa manohina olona ary marikoriko ny sanganasan'i Makoto Aida sy Leslie izay amidy any aminà toerana mihidy, nahoana ary no hita amidy eny amin'ny trano fivarotana lehibe eny ireo antontam-boky mivoaka isan-kerinandro ahitana sarin'olona miboridana. Nahoana no azon'ny Ray aman-dReny atao ny manome solosaina ny zanany raha toa ka tsy fantatr'izy ireo akory ny dikan'ny hoe fanalahidin'ny Ray aman-dReny (verrouillage parental)? Hadisoana goavana izany rehetra izany!
Lahatsoratra notsarain'i Sahar Habib Ghazi